Hordhac: Man City vs PSG - Rikoodhadoodii Hore, Shaqada Adag Ee U Taalla Poch, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Xaalka Mbappe - Laacib
HomeWararka Champions LeagueHordhac: Man City vs PSG – Rikoodhadoodii Hore, Shaqada Adag Ee U Taalla Poch, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Xaalka Mbappe
Hordhac: Man City vs PSG – Rikoodhadoodii Hore, Shaqada Adag Ee U Taalla Poch, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Xaalka Mbappe
Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabbilaysa PSG lugta labaad ee semi-finalka Champions League, iyadoo isha kusii haysa magaalada Istanbul oo ay ka dhacayso ciyaarta finalka.
Labada kooxoodba waxay kulankan yimaaddeen iyagoo guulo kasoo hooyey kulamadii maxalliga ahaa ee horyaalladooda ee Sabtidii. City ayaa 2-0 kusoo muquunisay Crystal Palace, halka ay PSG 2-1 kaga badisay Lens, isla markaana soo noolaysay rajada ay ka qabaan in horyaalka Ligue 1 ay difaacan karaan.
Tababare Pep Guardiola ayay kooxdiisu dhibaato dhadhaqamisay qaybta hore ee ciytaartii Parc des Princes, markaas oo PSG ay gool dhalisay, fursado kalena iska khasaariyeen, laakiin qaybtii dambe ayay City awood layaable lasoo baxday iyagoo kubadda ka dhaariyey Neymar iyo Mbappe oo ay kooxda reer France wax ka sugaysay, taas oo ay waliba ugu sii dareen laba gool oo shan daqiiqadood gudahood ay dhaliyeen De Bruyne iyo Mahrez iyo waliba kaadh cas oo uu ku baxay Gueye.
Xaqiiqada ah in ay kooxiba qayb maamulaysay ciyaarta ayaa halkeeda taalla, laakiin sida ay fursadahooda uga faa’iidaysteen ayay is-dheeraayeen, waxaana gacanta sare yeelatay City oo caawana garoonkeeda loogu imanayo.
Kaddib saddex sannadood oo isku xiga oo wareegga siddeedda ay ku hadheen, Pep Guardiola ayaa sannadkan ay ka go’an tahay in kooxdiisu ay tagto Ataturk Olympic Stadium oo 29 May lagu qabanayo finalka, halkaas oo ah garoonkii mucjisada ee Liverpool ay sannadkii 2005 ku qaadday koobka.
Ciyaartii ugu dambaysay ee horyaalka ee Sabtidii ayuu Guardiola nasistay siddeed ka mid ah xiddigihii uu PSG kula ciyaaray kulankii hore, waxaase labada gool ee ay libinta kaga heleen Palace u kala dhaliyey Sergio Aguero iyo Ferran Torres oo muujiyey in City ay tahay laba kooxood oo mid walba gaarkeeda u tartami karaysa.
Haddii ay caawa guuleysto Man City, waxay dhigi doontaa rikoodh taariikhi ah iyagoo soo qaban doona rikoodhkii Carlo Ancelotti ee toddoba ciyaarood oo isku xiga oo Champions League ah oo ay wada guuleystaan, iyadoo dhinaca Ingiriiskana ka noqon doonta kooxdii ugu horreysay ee sidaas samaysa.
Garoonka Etihad Stadium ee ay caawa tegayso PSG, waxa hore ugu soo garaacay Manchester City kooxaha Leeds United, Leicester City iyo Manchester United, waxaana ay isku dari karaan liiskan dhifta ah ee sannadkan la arkay.
PSG oo tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan ku bilaabatay niyad-jab iyo guul-darrooyin, waxa kulankii ugu horreeyeyba ka naxsatay Manchester United oo ku karbaashtay Parc des Princes, waxaana guul-darro kale oo 2-1 ah ugu dartay Borussia Dortmund. Iyadoo xaalkoodu sidaa yahay ayay u safreen magaalada Manchester, halkaas oo haddii lagaga soo badin lahaa ay ka hadhi lahaayeen tartankan socda ee ay semi-finalka joogaan, laakiin waxay kasoo heleen guul weyn iyagoo ku damaashaaday Old Trafford.
Mauricio Pochettino ayay horyaallaan saddex kulan oo adag oo ay tahay in uu ku badbaadiyo xilli ciyaareedka kooxda, waxaanay midda hore tahay, in caawa ay Man City kasoo adkaadaan, kaddibna ay isku diyaariyaan ciyaarta adag ee Montpellier HSC ay la ciyaari doonaan semi-finalka Coupe de France May 12. Horyaalka Ligue 1 oo sidoo kale ay kaalinta labaad kaga jiraan, ayay tahay in ay guulo ka keenaan si ay uga sare maraan Lille oo guul ay ka gaadhay Nice hoggaanka ugu soo laabatay.
Arrinta ay niyadda wanaagsan kusii dhisanayaan ciyaartoy PSG ka hor kulanka City ayaa waxa uu yahay, in lix ka mid ah toddobadii ciyaarood ee Champions League ee ay martida noqdeen xilli ciyaareedkan ay guulo soo heleen, sida Barcelona oo ay ku karbaasheen Camp Nou iyo Bayern Munich oo ay 3-1 kaga soo badiyeen iyagoo jooga Allianz Arena.
Kulamadii hore ee Man City & PSG
Kulanka caawa ayaa noqonaya markii shanaad ee ay Manchester City iyo PSG ku kulmaan dhamaan tartamada, waxaana kooxda reer France ay ku guul-darraysatay in dhamaan kulamadaas ay guul ka hesho City.
Garoonka Etihad Stadium ayay hal mar oo kaliya ku ciyaareen, waxaanu ahaa wareeggii siddeedda ee tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkii 2015-16 oo ay ku kala baxeen 2-2, waxaana semi-finalka u gudubtay Man City oo goolka barbarraha oo uu u keenay Kevin de Bruyne uu ka caawiyey in celceliska labada lugood ay ku gudubto.
Ciyaarta: Manchester City vs Paris Saint-Germain